Raw 17-Methyltestosterone poda Vagadziri & Vanotengesa - Fekita
Raw 17-Methyltestosterone powder ndeimwe yekare-kare inowanika mumuromo steroid, iyo inogona kubata kupererwa kwe testosterone muvarume, uye inobata kenza yemazamu mumadzimai emasopaopausal. Inoshanda kuburikidza nehutano hwemitambo mizhinji kuitira kuti muviri unogona kukura nekushanda zvakanaka.
Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4) Tsanangudzo
Raw 17-Methyltestosterone powder inogadzirwa, orally activeanabolic-androgenic steroid (AAS) iyo inoshandiswa mukurapa kukanganiswa kwe androgen munhurume uye nezvimwe zviratidzo.Sezvakaita sokunonoka kupera muvakomana, pamadhora maduku sechikamu ye menopausal hormone therapy ye menopausal zviratidzo zvinopisa zvinopisa, osteoporosis, uye chido chepabonde chepabonde kuvakadzi, uye kubata chirwere chepabonde muvakadzi.
Raw 17-Methyltestosterone powder zvakare inonzi methylated synthetic androgen receptor agonist ne anabolic effect. Raw 17-Methyltestosterone powder, kutevedzera testosterone, kusungirirwa kweytotosolic androgen receptors, uye kushandiswa kwechigadzirira nyukliya-yakagadziriswa kunokonzera kushandiswa kwezvinyorwa zve androgen zvinokonzerwa nemajene. Iyo mazai emagetsi anokonzera kukura kwakakwana nekugadzirisa nhengo dzepabonde dzevarume uye zvepabonde zvepabonde. Iyo mishandi inokonzerawo kuchengetwa kwe nitrogen, sodium, potassium, phosphorus, uye calcium.
Kemikari Name RU-24400;NSC-9701;17α-Methyltestosterone; 17α-Methylandrost-4-en-17β-ol-3-one
muchiso Name Android, Metandren, Testred
Molecular Wsere 302.45
Kunyorera Point 162-168 ° C (lit.)
Dhikirai: 383.47 ° C (yakawandisa kuongororwa)
Biological Half-Life anenge maawa 3 (kureva 2.5-3.5 maawa)
Skukodzera H2O: ≤0.5 mg / mL
APane Kushandiswa kwechiremba: Methyltestosterone kana kuti yakashandiswa mukurapa kunonoka kusvika pakuyaruka, hypogonadism, cryptorchidism, uye erectile kudzvinyirira muvarume, uye muzvikamu zvakaderera kubata manopausal zviratidzo (kunyanya osteoporosis, kupisa moto, uye kuwedzera libido nesimba), kurwadziwa kwepamuviri shure kwepamuviri uye kuputika, uye kenza yemazamu muvakadzi
Chii chinonzi Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4)?
17-Methyltestosterone, iyo yakagadzirwa neshetersterone, inonzi androgen uye anabolic steroid (AAS) mishonga. Iyo inonyanya kushandiswa mukurapa kwepasi pasi e testosterone mumarume, kunonoka kuberekwa muvakomana, pamadhodho maduku sechikamu chema menopausal hormone therapy kune menopausal zviratidzo zvakatsva kupisa, osteoporosis, uye chido chakanyanya chepabonde kuvakadzi, uye kubata chirwere chepabonde muvakadzi (1-3). Inoratidzika semuchena kana machena machena machena kana poda, iyo inosvibiswa mumhando dzakasiyana siyana dzegorosi yemhepo asi inenge isingasviki mumvura. Inofanira kunge iri pasi pemutemo wekutonga.
Methyltestosterone yakatanga kuwanika mu 1935 uye yakatangwa nokuda kwekurapa mu1936. Yakanga yakagadzirwa nguva pfupi mushure mekuwanikwa kwe testosterone, kuva imwe yekutanga yekugadzira AAS zvinodhaka. 17-Methyltestosterone, kunze kwekushanda kwayo, inogonawo kushandiswa kugadzirisa muviri uye kushanda.
Iyo yakakura 17-Methyltestosterone powder (58-18-4) mabasa
17-Methyltestosterone inotora matanho kuburikidza nemaitiro maviri makuru: kushandiswa kwe-androgen receptor (zvakananga kana seDHT), uye nekushandurwa ku estradiol uye kushandiswa kwevamwe vasero reestrogen.
17-Methyltestosterone inogona kupinda mumakamuri masvikiro emasero, kusungirirana ne-androgen receptor, kana kuderedzwa kuva 5α-dihydrotestosterone (DHT) ne cytoplasmic enzyme 5α-reductase. DHT inosungira kune imwechete uyerogen receptor kunyanya zvakasimba, ichipa simba rakasimba uye androgenic. I-T-receptor kana DHT-receptor yakaoma inoshandura sarudzo iyo inobvumira kuti ipinde mujeri reyero uye kusunga zvakananga kune zvakananga zvinokonzerwa nucleotide ye chromosomal DNA, iyo inonzi hormone response elements (HREs). Iyi nzira inotungamirira basa rekunyora kwemajeni akasiyana-siyana, nekuwedzera kubudisa uyerogen migumisiro.
17-Methyltestosterone inotungamirirwa nomuromo. Nhamba yakarongwa inopesana zvichienderana nezera, zvepabonde, uye kuongororwa kwemurwere mumwe nomumwe. Nhamba inogadziriswa maererano nemhinduro yomurwere uye kuonekwa kwekusateerera kwakashata. Kushandura inorapwa mu-androgen-yakakosha varume vanowanzodikanwa 10 ku 50 mg ye 17-Methyltestosterone zuva nezuva. Kunyange zvakadaro, nguva yezvakaitika uye mararamiro emakore anofanirwa kutorwa mukufungisisa zvose pakugadzirisa chiyero chekutanga uye mukugadzirisa chiremba. Mishonga inoshandiswa mukurapa kwekunonoka kwezera hwemazuva mazhinji inowanikwa muzasi yeiyo yakapiwa pamusoro, uye kwenguva shoma, somuenzaniso 4 kusvika kumwedzi 6. Kurapa kwekenza yepamuviri yevakadzi, muyero we17-Methyltestosterone muvakadzi hunobva ku 50-200 mg zuva rega rega.
17-Methyltestosterone powder inogona kubata zviratidzo zvakasiyana-siyana zvakadai se hypogonadism, cryptorchidism, kunonoka kuvepera, uye kuora kwe erectile muvarume, uye mumadhora maduku ekurapa zviratidzo zvemurumeopausal (kunyanya osteoporosis, kupisa moto, uye kuwedzera libido nesimba) uye engorgement.
Inoshandiswa zvakare kuvakadzi kubata chirwere chemuti, kuzvimba nekuda kwekuita pamuviri, uye nekuwedzera kwestrogen inogona kubata zviratidzo zvekuenda kumwedzi. Ive yakashandiswawo mukubatana neestrogen esterified pakurapwa kwemaitiro ekuratidza vasomotor zviratidzo zvakakomba zvinosangana nekuenda kumwedzi muvakadzi.
Tenga Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4) kubva kuBuasas.com
Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Migumisiro yeMethyl Testosterone Administration pamusoro pePlasma Viscosity muMasopopaopausal Women, PubMed Articles, Online, 2002
Rogerio, AL, Kuenda kumwedzi uye Kukwegura, Yen & Jaffe's Endocrinology Reproductive (Seventh Edition), 2014
Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Migumisiro ye17α-methyltestosterone, Methandrostenolone, uye Nandrolone Decanoate pamutambo wakakosha, Physiology uye Maitiro, 1997
Kickman, AT, Pharmacology yeAnabolic Steroids, British Journal ye Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018
1 Kudzokorora nokuti Raw 17-Methyltestosterone powder (58-18-4)
Chigadzirwa RAW 17-METHYLTESTOSTERONE chinobatsira chaizvo.